किन घट्दैछ श्रीमान–श्रीमतीवीच आत्मीयता ? यस्ता छन् कारणहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
नारी–पुरुष एक अर्काका परिपूरक हुन् । नारी पुरुषबीचको सम्बन्ध बिना यो सृष्टि नै असम्भव छ । भनिन्छ, नारीपुरुष अर्थात् श्रीमान श्रीमती एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । यात्राका क्रममा रथ चलाउन दुबै पाङ्ग्रा आवश्यक पर्दछ । एक पाङ्ग्रा मात्र प्रयोग भयो भने यात्रा अधुरै रहन्छ ।
अर्थात् त्यो यात्रा अपुरो रहन्छ ।श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध भनेको दुवै शरीर एक हुनु हो। जहाँ लाज, घीन पनि पचिसकेको हुन्छ । वैवाहिक जीवनमा चरम सुख छ । जहाँ माया र समझदारीले भरिएको वैवाहिक सम्बन्ध छ, त्यहाँ स्वर्ग खोज्न कहीँजानुपर्दैन ।
एक श्रीमान–श्रीमतीबीच संवेगात्मक, भावनात्मक यौनिकता जीवनका अधिकांश मिठास अर्थात् चरम आनन्द त्यही सम्बन्ध भित्र पाउन सकिन्छ । जहाँ प्रेममय सम्बन्ध हुन्छ,त्यहाँ श्रीमतीलाई दुख्यो भने श्रीमानले त्यो दुखाइको महसुस गर्छ । श्रीमानलाई दुख्यो भने श्रीमतीले त्यो दुखाइको महसुस गर्दछिन् । सम्पन भएको अवस्था होस् अथवा विपन्न भएको अवस्था होस् त्यो दुःखसुख दुवै श्रीमान श्रीमतीको साझेदारी हुन्छ ।
वैवाहिक जीवनमा आत्मीयतामा कमी आउनुका केही कारणहरु यस्ता छन्–
१) व्यस्तताः प्राय: धेरैजसोलाई अहिलेको भौतिकवादी सोच र अति महङ्गीमा घर व्यवहार चलाउन निक्कै मुस्किल छ । मानिसहरु पैसा कमाउन निक्कै भागदौड गरिरहेको अवस्था छ । प्रायःजसो श्रीमान श्रीमती नै काममा व्यस्त छन् । घरपरिवारलाई समय दिन नसक्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
२) अभावः कतै अभावले भावनात्मक सम्बन्धलाई अवरोध पु¥याएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा जताततै, जेसुकैको अभावै अभाव छ ।
भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारीहरुलाई तलबले महिना दिन टार्न। छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाले अधिकांशलाई निक्कै भारी बनाएको छ र तनाव थपिदिएको छ ।अभावै अभावको कारणले तनाव सिर्जना हुन्छ । जब अभावका कारण तनाव सिर्जना हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा उत्पन्न हुन्छ र एक सुन्दर वैवाहिक जीवनभित्र आत्मीयताको कमी उत्पन्न हुन्छ ।
३) मद्यपान; सूर्य अस्त, नेपाली मस्त भन्ने भनाइ नै छ । यही भनाइ वास्तविक साबित हुन्छ । हाम्रो समाजमा धुम्रपान मद्यपान गर्नेको सङ्ख्या ठूलै छ । मदिरा अर्थात् जाँडरक्सीले खासै फाइदा पु¥याएको देखिँदैन । आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व नै बिर्सिएर रक्सीमा तल्लीन हुनेको सङ्ख्या पनि निक्कै छ ।
वैवाहिक जीवनमा आत्मीयता नहुनु भनेको घर बिग्रिनु हो । घर बिग्रिनु भनेको छोराछोरी बिग्रिनु हो । भोलिका कर्णधार बिग्रिनु भनेको समाज बिग्रिनु हो । र, समाज बिग्रिनु भनेको राष्ट्र बिग्रिनु हो रक्सी पिउनेहरुका श्रीमतीहरु जहिले पनि पीडित देखिन्छन् । धेरैजसो मद्यपान अर्थात् रक्सीका कारणले महिलाहरुले घरेलु हिंसा खेप्नु परिरहेको छ । दिनै रक्सी पिएर पैसाको पनि नास, ज्यानको पनि नाश र घरमा झैझगडा एवं हिंसात्मक क्रियाकलापले वैवाहिक सम्बन्धमा ठूलै क्षति पु¥याएर आत्मीयतामा भङ्ग गरेको अवस्था छ ।
४) शिक्षा र स्वतन्त्रता : अहिलेका नारी पुरुष समान रुपमा शिक्षित हुँदै गइरहेको समयमा श्रीमान श्रीमती आआफैँमा सक्षम हुँदै गहिरहेका छन् । अहिलेको शिक्षित वर्गहरु जीवन आफ्नै तरिकाले बाँच्न चाहन्छन् । हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा युगौँदेखि महिलालाई दमन शोषण एवं दासका रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए ।
५) सञ्चार माध्यमः अहिलेको विभिन्न टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, भिबर, स्काइप विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि वैवाहिक जीवनमा उथल पुथल पारेको छ । अहिलेको समयमा घरको कोठामै बसेर संसार देख्न र संसारका मानिससँग वार्तालाप गर्न सहजै सकिन्छ । अहिलेको आधुनिक समयमा कोही पुरुष होस् अथवा महिला, नयाँ आकर्षण अर्थात् परपुरुष, परस्त्रीतिर झुकाव अर्थात् लगाव भएको देखिन्छ ।वैवाहिक जीवनमा तनसँगै भए पनि मनचाहिँ अन्तै भागेको अवस्था छ । अहिलेको सञ्चारले अवैध सम्बन्ध जोड्न सहज वातावरण सिर्जना गरेको छ
हाम्रो समाजमा पारिवारिक बिखन्डन अति नै बढ्दो छ । वैवाहिक जीवनमा आत्मीयता नहुनु भनेको घर बिग्रिनु हो । घर बिग्रिनु भनेको छोराछोरी बिग्रिनु हो । भोलिका कर्णधार बिग्रिनु भनेको समाज बिग्रिनु हो । र, समाज बिग्रिनु भनेको राष्ट्र बिग्रिनु हो ।त्यसैले यो संवेदनशील विषयमा हामीले समयमै गम्भीरतापूर्वक सचेत हुन अति नै आवश्यक देखिन्छ । (gnewsnepal बाट सभार)